छविले हारे शिल्पा विरुद्द विवाह बदरको मुद्धा । - Sabasta Entertainmnet
छविले हारे शिल्पा विरुद्द विवाह बदरको मुद्धा ।
प्रकाशित मिति : November 7, 2019	Sabasta Entertainment
सबस्त ईन्टरटेनमेन्ट,काठमाडौँ – चलचित्र निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेल बीचको पारिवारिक मुद्दा अहिले अदालतको विचाराधीन अवस्थामा छ ।
यसै बीच शिल्पा तर्फका बरिष्ठ अधिवक्ता रमेश प्रसाद गुरागाईंले अदालतीय खुलासा गरेका छन् । शिल्पा विरुद्द छविले हालेको विवाह बदरको मुद्दा खारेजी भएको बरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले खुलासा गरेका हुन् ।
‘छविलाई उनका पुर्वपत्नीहरुको साथ छ । भने, शिल्पालाई कानुन व्यवसायीले सहयोग गरिरहेका छन् । अदालतको जारी पक्राउ पुर्जीको धज्जी उडाउदै छवि खुल्लम खुल्ला हिडिरहेका छन् । शिल्पा विरुद्द विवाह बदरको मुद्दा खारेज भएपछि छविलाई पुन: एकपटक झट्का लागेको छ ।’ बरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले सबस्त इन्टरटेनमेन्टसँग भने ।
घरेलु हिँसापछि शिल्पाले छवी विरुद्द अंश, मानाचामल र सम्वन्ध विच्छेद्दको मुद्दा हालेकी थिइन् । त्यसपश्चात छविकी पहिलि पत्नी हेमा ओझाले दुवै विरुद्द बहुविवाहको मुद्दा हालिन् ।
लगतै जिल्ला अदालतले दुवैलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्यो । आफ्नो तर्फको पक्राउ पुर्जी खारेजको माग गरेपछि शिल्पालाई सम्माननीय सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले पक्राउ नगर्न आदेश दियो र त्यो फैसला अहिले पनि कायमै छ ।
अनि यो घटनापछि छविले वि:स. २०७३ सालको विवाहलाई बदर गराउन मुद्दा लिएर जिल्ला अदालत पुगे । जिल्ला अदालतले मुद्दा लिन नमानेपछि उनि उच्च अदालत पाटनको ढोका ढकढक्याउन पुगे । कार्तिक १४ गते मुख्य न्यायधिस नहकुल सुवेदी र अनन्तराज डुम्रेको उच्च अदालत पाटनको इजलासले छविको मुद्दा खारेज गरेको हो ।
यो मुद्दाको लागी छविले बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई वकिल राखेका थिए । थापा नेपालका वरिष्ठ र अनुभवी अधिवक्तामा गणना हुन्छन । छवि र शिल्पाले वि:स. २०७३ सालमा विवाह गरेका थिए ।